Aabe 4 xaasle ah oo dalka Jarmalka ka yaabsaday iyo Warbaahinta dalkaas oo daba dhigatay (Daawo Sawiro) – Xeernews24
Inta badan Jaraaid-yada ugu caansan gudaha dalka Germany ayaa waxa ay maalmahaan dambe dab dhigteen Aabe u dhashay dalka Siiriya kaas oo gudaha Jarmalka kula soo qaxay 4 Xaas iyo 23 Caruur ah .
Ninkaan Siiriyaanka ah ayaa waxaa lagu magacaabaa Ghazi Ali waana 49-jir . Sharciga dalka Germany iyo guud ahaan kan wadamada Yurub ayaa waxa uu dhigaya ninka in uu guursan karo 1 Xaas oo kaliyah balse raga qaba Xaasaska badan ayaa Dowladaha Yurub ka qariya inay leeyihiin xaasas kale.
Ghazi Ali ayaa gudaha dalka Germany waxa uu keensaday ama dalka Siiriya kala soo qaxay 4-Xaas iyo 23-Caruur ah (12-Gabdhood iyo 11-Wiil) . Saxaafada wadanka Germany oo daba dhigatay Ghanzi Ali waxeey soo bandhigeen in Bil kaste lacagta Caydha loo yaqaan oo uu u qaato qarash dhan 30.000 oo Euro taas oo sanadkii noqoneysa 360.000 oo cadhu ku abuurtay dad badan oo Jarmal ah.
Air Djibouti oo Xayeeysiis u bilowday Barbara oo waa Hora laga guuray Amxaaro iyo Tigree Keeba Cadawga Koobaad ee Ummadda Soomaaliyee?